Ny Tiger Technology dia mampiseho ny fitahirizana sy alàlan'ny alàlan'ny fiaraha-miasa ao amin'ny IBC 2019 - NAB Show News nataon'i Broadcast Beat, Broadcast an'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Ny Tiger Technology dia mampiseho ny fitahirizana fiaraha-miasa sy ny alàlan'ny workflows amin'ny IBC 2019
Ny Tiger Technology dia mampiseho ny fitahirizana fiaraha-miasa sy ny alàlan'ny workflows amin'ny IBC 2019
Ny fampisehoana azo ampiharina amin'ny AWS sy ny fampifangaroana amin'ireo mpamolika ny antoko fahatelo dia hametraka ny fototry ny fijoroan'ny Tiger Technology amin'ny expo teknolojia famaranana amin'ity taona ity
GA, Etazonia, 11 Septambra 2019 - Tiger Technology, mpitarika ny fitahirizana rahona sy ny fitantanana angon-drakitra ho an'ny tsenan'ny fampitana an-gazety sy famokarana aorina, dia hampiasa ny IBC amin'ity taona ity hanehoana ny vokatra hampidirany ny serivisy Amazon Web (AWS). Ireo rafitra ireo dia natao hanampiana ny mpanjifa hifindra votoaty arsivan'ny lova avy amin'ireo rafitr'asa antitra mankany amin'ny rafitry ny rahona na hybrid, miaraka amin'ny tanjona hampihenana ny arisivana ary hampitomboana ny fidirana. Ny rafitra Tiger dia mampiditra miaraka amin'ireo vahaolana amin'ny Media-tape-to-rahona vahaolana amin'ny fitantanana ny fifindra-monina, ary koa miaraka amin'ny Spectra Logic sy Qualstar fitahirizana sy rafitra fananganana backup. Hisy koa ny fampisehoana ny arofan'asan'ny Tiger Technology sy ny fitantanana ny angon-drakitra mifangaro amin'ny rafitra fitehirizana ny rahona ERA sy ny rafitra famoronana votoaty.
Ny tambajotra mpiara-miasa Tiger izao dia ahitana an'i Nexsan, orinasa StorCentric. Nexsan sy Tiger dia nanao sonia fifanarahana mpivarotra eran-tany, izay hanoloran'i Nexsan ny rindrambaiko Tiger Technology Collaborative Content Creation sy Media Management ho an'ny rafitra fitahirizana Nexsan. Ny fampifangaroana lozisialy Nexsan sy rindrambaiko Tiger dia manome làlan-kiasan-tsasatra feno fampitaovana asa fampiasa amin'ny alàlan'ny tambajotra Nexsan manerantany.
Ho hitan'ny mpitsidika hitsangana 7.B58 ao amin'ny IBC ny fampisehoana mivantana ny fomba fampiasan'ny Tiger Technology ny herin'ny AWS. Ny fijoroan'ny Tiger Technology dia hifamatotra amin'ny trano rantsana AWS ao amin'ny Hall 5, izay hanehoana ny fizarana votoaty sy ny rindran-tserasera amin'ny serivisy hafa. Haverina amin'ny alàlan'ny kasety ny rakitra amin'ny alàlan'ny haitao Media Translation Inc ary ampianarin'ny rindrambaiko fitantanana ny fananana haino aman-jery Overcast HQ, miaraka amin'ny zavatra rehetra ampidirina amin'ny Tiger Bridge.
Tiger Bridge dia manome alàlan'ireo antontan-taratasy fitahirizana rahona. Ny dikan-tsarimihetsika farany indrindra dia mahatonga ny fahazoana angon-drakitra haingana kokoa noho ny taloha noho ny fahazoana ampahany amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Io dia mamela ny mpampiasa hahazo fotoana sy hamonjy amin'ny toerana fitahirizana amin'ny alàlan'ny famerenany ny habetsaky ny data ilaina fotsiny. Tiger Technology dia nanorina ny lazany amin'ny famolavolana rindrambaiko sy ny rafitra fitantanana angon-drakitra, azo antoka ho an'ny orinasa IT, ny fanaraha-maso, ny haino aman-jery sy ny fialamboly. Tao anatin'ny taona 15 farany dia neken'ny mpanjifa sy ny mpamatsy tolotra amin'ireto sehatra ireto ny fahatokisana sy mahomby ary mahomby.
Tiger Technology ihany koa dia hampiseho ny Tiger Store amin'ny fitantanana ireo atrikasa iraisan'ny mpiara-miasa maro amin'ny haino aman-jery; Tiger Spaces, natao ho an'ny fitantanana tetikasa marobe mpampiasa sy mazoto hidy; ary ny talen'ny fitahirizana virtoaly, Tiger Pool.
Anisan'ireo fitaovana ambony indrindra mampiasa Tiger Technology ny ENVY Post Production. "Valo taona mahery izao no nampiasanay ny vokatra Tiger," hoy i Jai Cave momba ny asa teknika ENVY UK. "Ny ENVY dia miasa amin'ny fangatahana, matetika ny famokarana haingana sy ny rafitra Tiger no manome ny fahaiza-manao, ny fahatokisana ary ny fanampiana ilaintsika."
Tiger Bridge dia haseho miaraka amina fitahirizana Coeus rahona avy any UK IT workflow manam-pahaizana manokana, izay miasa miaraka amin'i Tiger Bridge amin'ny endriny, ary koa ny fitaovana famoronana votoaty miaraka amin'ny Tiger. Mijanona irery na mitambatra, i Tiger Bridge dia manome hery ireo mpampiasa mba hanana rakitra mety amin'ny toerana mety amin'ny vidiny mety.
Ireo vokatra sy fihetsiketsehana rehetra ireo dia azo jerena amin'ny fijoroan'i Tiger Technology, 7.B58, ao amin'ny IBC ao Amsterdam RAI manomboka amin'ny 13 ka hatramin'ny 17 Septambra.
Momba ny Tiger Technology
Tiger Technology dia namolavola rindrambaiko sy namolavola vahaolana ho an'ny famandrihana angon-drakitra avo lenta, azo antoka, azo antoka ho an'ireo orinasa ao amin'ny Enterprise IT, Surveillance, Media and Entertainment, ary SMB / SME tsena hatramin'ny 2004. Notaterin'i Endeavie ho iray amin'ireo mpamatsy teknolojia rahona eo an-tsena anio.
Mampiasa vahaolana Tiger any amin'ireo firenena 120 ny mpanjifa. Ny portfolio rindrambaiko Tiger dia misy ny fizarana rafitra avoakan'ny rakitra NAS / SAN avo lenta, famandrihana volume an'ny virtoaly ary fitantanana asa ho an'ny tetik'asa virtoaly ankoatry ny fantsom-pahavam-peo HSM ary ny famandrihana vahaolana. Ny Tiger Technology dia ahafahan'ny fikambanana misy habe sy haingon-trano hitantana ny fananany nomerika an-tany mialoha, rahona ho an'ny besinimaro, na modely hibrida.
Natao mitokana ny orinasa ary mahazo tombony amin'ny talenta ananan'ny indostrian'ny traikefa sy ny matihanina 40. Ny foibeny ao Sofia, Bulgaria ary any Alpharetta, GA, Etazonia.
Raha mila fanazavana bebe kokoa, tsidiho ny: www.tiger-technology.com/
Momba ny Amazon Web Services
Nandritra ny 13 taona, ny tranonkala Amazon dia ny habaka rahona manerantany sy be mpampiasa maneran-tany. Ny AWS dia manolotra serivisy serivisy 165 an-tsakany sy an-dahatsoratra ho an'ny tahiry, fitehirizana, angon-drakitra, tambajotra, famakafakana, robotika, fianarana milina ary fahalalàna artifical (AI), Internet of Things (IoT), finday, fiarovana, hibrida, virtoaly sy fitomboan'ny zava-misy (VR sy AR) ), ny fampitam-baovao sy ny fampivoarana ny fampiharana, ny fampielezana ary ny fitantanana ny 69 Availability Zones (AZs) ao anatin'ny faritra geografika 22, izay nitarika ny US, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, Hong Kong Special Administration Region, India, Ireland, Japon, Korea, Moyen Orient, Singapore, Soeda, ary Angletera. Mpanjifa an-tapitrisany - ao anatin'izany ny fanombohana vao haingana, ny orinasam-pifandraisana lehibe indrindra, ary ny masoivohon'ny governemanta — dia matoky ny AWS hahay hanao ny fotodrafitrasa, ho lasa masiaka kokoa ary mihena ny vidiny.
Raha mila fanazavana bebe kokoa, tsidiho ny: aws.amazon.com/
Momba an'i Nexsan
Nexsan® dia mpitarika fitehirizana ny orinasa manerantany, manome alalana ny mpanjifa amin'ny fiarovana azo antoka, hiaro ary hitantana ny angon-drakitra momba ny fandraharahana. Niorina tao amin'ny 1999, Nexsan dia nanorina laza malaza amin'ny famitana fitahirizana tena azo itokisana sy lafo vidy ary mijanona ho mavesatra amin'ny fametrahana fitehirizana misy tanjona. Ny fatran'ny haitao tokana sy miompana amin'ny resaka teknôlôjia dia mivoatra, fitaky orinasa ilaina miaraka amina portfolio iray feno fitahirizana, fitahirizana ny fako, ary fitahiry azo antoka. Nexsan dia manova ny indostrian'ny fitahirizana amin'ny alàlan'ny fanodinana ny angon-drakitra ho tombotsoan'ny orinasa miaraka amin'ny fenitra tsy miovaova sy ny fenitry ny fanarahan-dalàna. Mety amin'ny karazana fampiasa isan-karazany, ao anatin'izany ny Governemanta, ny Fahasalamana, ny Fanabeazana, ny Siansa Fiainana, ny Media & fialamboly, ary Toeram-piantsoana. Nexsan dia tafiditra ao anatin'ny fianakavian'ny marika StorCentric ary miasa toy ny fizarana misaraka amin'ny fiarovana tsara ny mombamomba ny fandraharahana.
Raha mila fanazavana bebe kokoa, tsidiho ny: www.nexsan.com/
Polar Graphics dia mijoro ao amin'ny ISE 2020 - Desambra 11, 2019
Finepoint Broadcast dia mikendry ny 2020 miaraka amina fampiasam-bola lehibe hafa amin'ny lensa Canon UHD - Desambra 11, 2019
fampitana injeniera fampitana Engineering Cloud Storage Fitahirizana fiaraha-miasa angona fitantanana fialonana Era Post Production ibc 2019 fampidirana Media Management Media Translation Inc. Nexsan Overcast HQ lahatsoratra famokarana Tiger BridgeAWS Tiger Store Tiger Technology Video injeniera virtoaly zava-misy Workflows	2019-09-11
Previous: Haino aman-jery Production Specialist
Next: Pixel Power dia manampy ny Software Defined Uncomeded IP Fahaiza-mametraka amin'ny napetraka StreamMaster Integrated Playout